Diinta iyo dadka iyamaa mudan? – Kaasho Maanka
Ka jawaabidda waydiinta sare ku xusan waxay fududaanaysaa marka aan ogaano mudnaanta iyo qiimaha qofku leeyahay, qof aan garanayn mudnaanta insaanku leeyahay way adag tahay inuu jawaab dhex-dhexaada ka bixiyo.
Inta aynaan jawaabta u galin waxaa waajib ah inaan is waydiino diintu ma jiri kartaa dad la’aan? Dadku se ma jiri karaan diin la’aan? Dadku waa jiri karaan waana noolaan karaan diin la’aan, diintuse ma jiri karto dad la’aan waayo dadka ayaa sameeya derejada iyo qiimayntana siiya si la mid ah sida dadku lacagta u sameeyo iyadoo waraaqo ahna qiime ugu yeelo
Diintu waa xeerar ay dadkii hore qorteen una tiiriyeen awood sare oo ayna arag sidoo kalana cid ku sugi karta caddaymo jiritaankeeda ayna jirin, xeerkaasi kama mudnaan karo dadkii hore ee sameeyey ama dadka maanta haysta ee ku dhaqma.
Haddii maanta adduunka dad laga waayo ama dadku diimaha dhaafaan aaminaadooda iyo ku dhaqankooda sidaasay ku baaba’aysaa diintu, sidaa darteed dadka ayaa ka mudan diinta.
Waxaad arkaysaa dad naxaya oo calaacalaya marka la dhaliilo diinta ay aaminsan yihiin hadana ku farxaya oo ku qaboobeya marka uu naf u gooyo diinta darteed, naf qof aadane ah waxaa kala qiime badan qoraalo aan micne badan samaynayn oo uu awooyaashi ka dhaxlay.
Xattaa hadii aynu indhaha is qabano garashadeenana ka tanaasulno oo dhahno diinta waa la soo dejiyey, waydiintu waxay tahay yaa loo soo dejiyey? Dadka saw maaha jawaabtu? Hadii ay jawaabtu dadka tahay diintu miyay ka mudnaan kartaa kuwii loo soo dejiyey? Hadii aabaha dhar kuu keeno micneheedu maaha in dharku kaa mudan yahay.
Waxay dhisayaan Masaajiddo iyo dhismayaal diimeed oo ay ku kacayso malaayin doolar dadkiina gaajo, cudur iyo dagaalo diimeed ayay la il daran yihiin tolow yaa loo dhisaya dadkiiba dhamaayee? Mise waxba dhisi maayaane dadkay ku dhacayaan? Dadka in la dhiso oo la maal-geliyo miyaanay ka mudnayn masaajid iyo dhagxaan la qurxiyo kadibna dadka abaaruhu ku dhafteen ama baahan looga dhex duceeyo?
QORMO LA XIRIIRTA: Baron d'Holbach iyo doodda diidmada Eebbe
Diintu xuquuq ma leh noocay doonto ha ahaato laakiin waxaa xuquuq leh qofka aaminsan, diintayda xushmee ma odhan kartid laakiin waxaad iga codsan kartaa inaan adiga ku xushmeeyo waxa aad rabtaba aad aaminsanaatide maadama aad xaq u leedahay inaad aaminto wixii aad doonto.
Diintaada haddii aanad rabin in la dhaliilo laabtaada ku hayso dadkana ha ula iman, sababtoo ah wixii aad ceeb ama khalad u taqaan nin bay caadadiisa tahay ama la saxan tahay, dadka oo dhami kuguma raaci karaan aragtidaada ama diintaada.
Xaqqu ama xuquuqdu maaha wax diintu bixiso laakiin waa wax qof walba iyo noole kasta la dhasho, xaqqa inaad noolaato diintu ma bixiso sidoo kalena ma qaadi karto, waana gef iyo khalad in naf la gooyo si diinta loo raali geliyo.
Marka la leeyahay diintu xuquuq bay keentay ama soo kordhisey waa been aan raad lahayn, waayo ma jiro qof aan dhalan isagoo xor ah, waxa dadka gumeeya ee qaybiyaa waa diimaha dadku samaysteen.
Mar walba iyo meel kasta dadka iyo noolaha ayaa ka mudan diinta, dadka iyo noolaha ayaa xuquuq leh, diinta dadka ayaa samaystay, gaadhigu kama mudnaan karo ninkii ama haweenaydii samaysatay, diinta dadka aaminsan ayaa xuquuq leh, dadkaasi hadday meesha ka baxaan diintuna way ka bixi waayo jiritaanka diintu jiritaanka dadka ayuu ku xidhan yahay.
Waad ku mahadasan tihiin howsha aad u heysaan bulshadeena hore u socda
waa qoraal aad u fiican oo fiiro dheer leh walal, waad kumahadsantihiin. bulshadeena caawinaad badan ayeey u baahantahy.
Waad Ku Mahadsantihiin aragtida Dheer Iyo Fiirada Gaarka ah ee Indha shareerada Jahliga
Aad ku Feydasan KINGZ
Hore U zocda
Zhakhziyadeyda Ma Hayzto Wx Diina
Weligeyna Cid Kuma aanan Murmin afaarahaaz
W/Q: Khaled Hassan 15th July 2018